Chaise Lounge Pfungwa
Chipiri 23 Kukadzi 2021
Chaise Lounge Pfungwa Dyhan imba yekugara yekutandarira inosanganisa dhizaini yechizvino nehunhu hwekumabvazuva mazano uye nheyo dzerunyararo rwemukati nekubatana neakasikwa. Kushandisa Lingam senge fomu yekusimudzira uye iyo Bodhi-muti uye maJapan minda semagariro pane iwo module yenyaya, Dhyan (Sanskrit: fungisisa) anoshandura huzivi hwekumabvazuva kuve mumhando dzakasiyana-siyana, zvichibvumira mushandisi kusarudza nzira yake kuenda zen / kuzorora. Iyo mvura-dziva modhi yakakomberedza mushandisi neine pombi yemvura uye dziva, apo gadheni nzira inotenderedza mushandisi neye greenery. Chimiro chakajairwa chine nzvimbo dzekuchengetera pasi pechikuva chinoshanda sherufu.
3D Kumeso Inozivikanwa Yekuwana Kutonga
Muvhuro 22 Kukadzi 2021
3D Kumeso Inozivikanwa Yekuwana Kutonga Sangana neakawanda sensor uye kamera yekuwana control system, Ezalor. Algorithms uye komputa komputa yakagadzirirwa zvakavanzika. Iyo yezvemari chikamu chekurwisa-kubira tekinoroji inodzivirira iyo yemanyemba-kumeso masks. Nyowani inoratidza mwenje inounza nyaradzo. Mukupenya kweziso, vashandisi vanogona kuwana nzvimbo yavanoda zviri nyore. Its no-touch certification inovimbisa hutsanana.
Kuunganidzwa Kwefanicha Phan Kuunganidzwa yakafuridzirwa nePhan mudziyo uyo uri Thai mudziyo wetsika. Iyo yekugadzira inoshandisa chimiro chemidziyo yePhan kugadzira chimiro chemaficha icho chinoita kuti chikasimba. Dhizaina fomu uye chinyorwa chinoita kuti ive yazvino uye yakapusa. Mugadziri akashandisa laser-cut tekinoroji uye yekupeta simbi sheet muchina kusanganisa neiyo CNC huni yekugadzira yakaoma uye yakasarudzika dhesi iyo yakasiyana kune vamwe. Kumusoro kwapera nemuputi-wakasunganidzwa system kuita kuti chimiro chigare nguva refu, yakasimba asi yakajeka.
Mugovera 20 Kukadzi 2021
Kupeta Stool Pakazosvika 2050 zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevanhu vepasi vachagara mumaguta. Chinangwa chikuru kumashure kwaTatamu ndechekupa fenicha inochinja-chinja vanhu vane nzvimbo diki, kusanganisira avo vanogara vachifamba. Iro basa ndere kugadzira intuitive fenicha inosanganisa robustness ine Ultra-yakaonda chimiro. Zvinongoda kusimuka kwega kufamba kuti uise chigaro. Nepo hoko dzese dzakagadzirwa nemucheka wakareba uchichengeta huremu huremu, mativi emapuranga anopa kugadzikana. Kamwe kudzvinyirira kwashandiswa pairi, icho chigaro chinongosimba sezvo zvidimbu zvacho zvichizvivharira pamwechete, nekuda kwekuita kwaro kwakasiyana nejometri.
Chigaro Iyo Haleiwa inopfekedza rattan mumatsimba anotsvaira uye inokanda musara wakasarudzika. Izvo zvigadzirwa zvakasikwa zvinobhadhara kukudza kune tsika yehunyanzvi muPhilippines, dzokorora kwenguva dzazvino. Pair, kana inoshandiswa sechinhu chechitaurwa, kuenderana kwezvakagadzirwa kunoita kuti chigaro ichi chienzane netaera dzakasiyana. Kugadzira chiyero pakati pechimiro uye basa, nyasha uye simba, kuvaka uye dhizaini, iyo Haleiwa yakagadzikana sezvakanaka.
China 18 Kukadzi 2021
Basa Rambi Pluto anochengeta kutarisa kwakasimba pane chimiro. Yayo compact, aerodynamic silinda inorongedzwa nekwakatsetseka mubato rakakomberedzwa pane yakarembwa matatu matatu matanho, zvichiita kuti zvive nyore kumisikidza neyakajeka-asi-rakatarisana nechiedza zvine mutsindo. Chimiro chayo chakafemerwa neteresikopu, asi pachinzvimbo, chinotsvaga kutarisa pasi pane nyeredzi. Yakagadzirwa ne 3d kudhinda uchishandisa chiuru-chakavakirwa mapurasitiki, iyo yakasarudzika, kwete chete yekushandisa 3d maprinta muindasitiri fashoni, asiwo eco-inoshamwaridzika.
Calendar 2014 “Farm” Kalendari Svondo 7 Kurume
Calendar 2014 “Town” Khalenda Mugovera 6 Kurume
Artificial Topography Yekuisira Topography Chishanu 5 Kurume
Chaise Lounge Pfungwa 3D Kumeso Inozivikanwa Yekuwana Kutonga Kuunganidzwa Kwefanicha Kupeta Stool Chigaro Basa Rambi